Biyo La'aan laga soo sheegayo deegaano ku yaala gobolka Galagaduud – SBC
Biyo La'aan laga soo sheegayo deegaano ku yaala gobolka Galagaduud
Maamulka Ahlusuna Waljamaaca ee degmada Balambal ee gobolka Galgaduud ayaa ku dhawaaqay dhibaato baahsan oo dhanka biyaha ah oo ka jirta degmadaas.
Gudoomiye ku xigeenka Maamulka Degmada Balambal ee gobolkaas ayaa sheegay in deegaanka ay ka jirto dhibaato baahsan oo dhanka biyaha ah, islamarkaana ay fariisteen Matooro 3 ahaa oo deegaanka biyaha siin jiray.
Maxamuud Maxamed Cabdi ayaa SBC sidoo kale u sheegay in siweyn ay uga cabsi qabaan biyo la’aanta jirta in ay sababto dhimasho ku yimaada dadka halkaasi ku dhaqan .
“Majirto meel u dhow deegaanka Balambal oo aan isleenahay Gaadiidka biyo ayay ka soo qaadi karaan, waana mid aan aad uga cabsi qabno in dadka ay dhintaan hadii aanu Alle raxmadiisa u keenin” ayuu yiri gudoomiye ku xigeenka Degmada Balambal .
Waxa uu intaasi ku daray in hadii ay suurto gal noqoto in biyo la keeno deegaanka ay hadana dhibaato noqoneyso sidii loo iibsanlahaa maadaama ay qaali noqonayaan .
Sikastaba ha ahaatee ka dibn 24tii saac ee ugu dambeeyay deegaanka waxa uu ahaa mid biyo la’a maadaama ay jabeen ceelashii biyaha soo saari jiray, waxaana ay ka codsadeen maamulka iyo odayaal dhaqameedka Deegaankaasi Hay’adaha Samafalka iyo ganacsatada Soomaaliyeed in ay wax ka qabtaan arintan biyo la’aanta ah.